DeltaFosB သည် kappa-opioid receptor agonist U50488 (2012) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn ၏စိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချစဉ်ကိုကင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးစေသည်။
comments: စိတ်ဖိစီးမှုသွေးဆောင် deltafosb သော induction နှင့်နျူကလိယ accumbens sensitizes ကြောင်း deltafosb သော induction အကြားခြားနားချက်များရှင်းပြ
Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012 ဇန်နဝါရီ 1; 71 (1): 44-50 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2011.08.011 ။ EPub 2011 စက်တင်ဘာ 29.
စိတ်ရောဂါကုသမှု, Harvard Medical School က, McLean ဆေးရုံ, 115 စက်လမ်း, Belmont, MA 02478, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။
အဆိုပါကူးယူအချက်ΔFosB၏ elevated စကားရပ်အထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဧရိယာများ (ဥပမာ, နျူကလိယ accumbens [NAc]) အတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အတူ။ ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအပေါ်ΔFosB၏ persistent သက်ရောက်မှုစွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများကြောင်းအမူအကျင့်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စကားရပ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကΔFosBကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏တုန့်ပြန်သြဇာလွှမ်းမိုးပုံကိုကို examine ။
ကျနော်တို့ (NAc နှင့် dorsal striatum အပါအဝင်) striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏သွေးဆောင် overexpression နှင့်အတူ Transgene ကြွက်တွေမှာကိုကင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ဖို့ intracranial Self-stimulation (ICSS) ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လျှပ်လှုံ့ဆော်ဖို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးကြွက်ဆွ (ခုံ) ဆုချီးဖြစ်လာသည်မှာအကြိမ်ရေဆုံးဖြတ်ရန် ICSS များအတွက် '' နှုန်းကို-အကြိမ်ရေ '' လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ကိုကင်းသက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးကထိုး-effect ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Over-ဖော်ပြΔFosBပြပွဲကြွက် littermate ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ကြိုးမှမူးယစ်ဆေးဝါး၏ (တံခါးခုံ-လျှော့ချ) သက်ရောက်မှု sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Over-ဖော်ပြΔFosBကြွက်တွေကိုလည်းလိုလားတဲ့စိတ်ကျရောဂါ (တံခါးခုံ-မြှ) သက်ရောက်မှုများလျော့နည်းထိခိုက်မခံခဲ့ကြ U50488တစ် Kappa-opioid agonist ကြွက်များတွင် dysphoria နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများသွေးဆောင်သိ။
ဤရွေ့ကားဒေတာ striatal ဒေသများတွင်ΔFosB၏ induction မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှစ်ခုအရေးကြီးသောအမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ-တိုးလာ sensitivity ကိုရှိပါတယ်အကြံပြုနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ထုတ်လုပ်ရှုပ်ထွေးပြီးစွဲမှအားနည်းချက်လက္ခဏာပြသကြောင်း phenotype အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်မှ sensitivity ကိုလျှော့ချ။
keywords: ကူးယူအချက်, နျူကလိယ accumbens, ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်, စွဲလမ်း, ခံနိုင်ရည်, စိတ်ဖိစီးမှု, မော်ဒယ်, mouse ကို
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး induces fos နျူကလီးယပ် accumbens (NAc ၏အာရုံခံအတွက်မိသားစုကူးယူအချက်များ; 1), တစ်ဦးဖွဲ့စည်းပုံမှာမူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကို (အတွင်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ2-5) ။ အများဆုံး Fos-မိသားစုပရိုတိန်းယာယီအောက်ပါမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုနာတာရှည်ထိုးနှင့်အတူ attenuated သည်ΔFosBသည်တစ်ဦး splice မူကွဲနေစဉ် fosB မျိုးဗီဇ (ပျက်စီးခြင်းမှခံနိုင်ရည်နဲ့အထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစုဆောင်း6, 7). အဆိုပါ NAc ၏ dynorphin / ပစ္စည်းဥစ္စာ, P-အပြုသဘောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွင်းΔFosB၏စကားရပ်ထဲမှာမြဲမြင့်တက်စွဲ၏ဝိသေသအပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်၏မူးယစ်ဆေးတိုးမြှင် sensitivity ကိုမှဦးဆောင်မယ့် neuroadaptation ကြောင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားယခုရှိပါသည် (8, 9) ။ အမှန်စင်စစ်ကင်း (ထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွေထက်ကဤအာရုံခံအတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင်, ဆဲလ်-တိကျတဲ့ overexpression နှင့်အတူ Transgene ကြွက်တွေမှာအနိမ့်ဆေးများမှာ conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးတည်စေ10) ။ ထို့အပြင်ΔFosB-overexpressing ကြွက်အားဖြည့်များ၏တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားထဲမှာကိုကင်းတာဟာအဘို့အနိမ့်ဆေးများမှာသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးနှင့်ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်မှုအသုံး (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုမြင့်မား '' breakpoints အား '' ကိုပြသ) (11) ။ အတူတကွဤအချက်အလက်များကို NAc အတွက်မြင့်မားသောΔFosBကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုတိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်။
ထပ်ခါတလဲလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအပါအဝင်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတော်ကြာပုံစံများ, ကိုလည်း NAc နှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများ (ထဲမှာΔFosBသွေးဆောင်12-14) ။ ထိုသို့သောသော induction dynorphin / ပစ္စည်းဥစ္စာ P- နှင့် enkephalin-ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်အကြမ်းဖျင်းအညီအမျှမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ NAc အတွက်ΔFosB၏အဆင့်မြင့်ကိုလည်းသဘာဝအဆုလာဘ် (မှ sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန်သောကြောင့်15-17) ဤဒေတာအလားအလာနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆန္ဒရှိ (dysphoric) သက်ရောက်မှုအချို့ offset နိုငျသောအစားထိုးတုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေနာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့ wildtype ကြွက် NAc အတွက်ΔFosBအဆင့်ဆင့်အကြားခိုင်မာသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုနှင့်ကြွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှ deleterious အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုကိုပြသပေးသောဖို့ဒီဂရီကိုပြသသည့်အတွက်စမ်းသပ်ချက်များကထောက်ခံသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကင်းမှတုန့်ပြန်ကြီးထွားပြသသောΔFosB-overexpressing ကြွက်၏တူညီသောလိုင်းလည်း (နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းလွယ်ကူစွာထိခိုက်ပြသသည့်အတွက်စမ်းသပ်ချက်များကပြည့်စုံနေကြတယ်14) ။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, NAc အတွက်ΔFosB၏တိုးမြှင်စကားရပ်စိတ်ဖိစီးမှု ( 'ခံနိုင်ရည်') မှခုခံဖန်တီးပေးသွားဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဦးနှောက် Kappa-opioid အဲဒီ receptor (KOR) စနစ်များကိုစိတ်ဖိစီးမှု၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းစုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ KOR agonists ၏အုပ်ချုပ်ရေး (လူသားတွေအတွက် dysphoria ထုတ်လုပ်18, 19) နှင့်ကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး (20-24) ။ အရေးကြီးတာက, KOR agonists (စိတ်ဖိစီးမှု၏အချို့သောကဏ္ဍများတူတဲ့နိုင်ပါတယ်25-28) ။ ဒီဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, သောတဦးတည်းယန္တရားအချက် (CRF) နှင့် dynorphin လွှတ်စိတ်ဖိစီးမှု peptide corticotropin, KORs များအတွက် endogenous ligand (အကြားအပြန်အလှန်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်29): စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု (dynorphin လွှတ်ပေးရန်နှင့် KORs ၏နောက်ဆက်တွဲဆွ၏ CRF အဲဒီ receptor-mediated ဆွမှုကြောင့်ပေါ်လာ30, 31) ။ ဒီယန္တရား၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်, KOR ရန် (စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့20, 25, 32-35) ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် KOR agonists ၏လေ့လာမှုများကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုတုန့်ပြန်၏ဦးနှောက်ယန္တရားအပေါ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျကွောငျးကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကိုဘယ်လိုမြင့်မားသောΔFosB၏စကားရပ်အကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်နှစ်ဦးစလုံးမှအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံကြောင်းတစ်ခုတည်းအပြုအမူ assay အသုံးပြု. ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကိုသာသက်ရောက်: အ intracranial Self-stimulation (ICSS) ပါရာဒိုင်း။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ထဲထညျ့လျှပ်မှတဆင့်လျှပ်စစ်ဆွဆုချီးဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး။ ကလူ (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးရုပ်သိမ်းရေး, antipsychotic အေးဂျင့်များ, Anti-Manic အေးဂျင့်များ, Kappa-opioid အဲဒီ receptor [KOR] agonists, စိတ်ဖိစီးမှု) တွင် anhedonia သို့မဟုတ် dysphoria ထုတ်လုပ်ကြောင်းကုသသော်လည်း ( "တံခါး") တုံ့ပြန်ရေရှည်တည်တံ့ကြောင်းဆွ၏အလွဲသုံးစားမှုကျဆင်းခြင်းပမာဏ၏မူးယစ်ဆေးဝါး, (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ယခင်ကတုံ့ပြန်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြောင်းဆွ၏ပမာဏမဟုတ်တော့ကုသမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ, ICSS တံခါးခြီးမွှော 36) ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ICSS ဆုလာဘ်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးမှအထိခိုက်မခံသည်ဆုလာဘ်လျော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်တိုးမြှင့်။ ဒါကြောင့် data ကိုအနက်ဖွင်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ကိုတုန့်ပြန်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ကုသမှုသမိုငျးတှငျအကြား-assay အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလျှော့ချ, စမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေများတွေနဲ့ parameters တစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်ဖွဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကိုအကဲဖြတ်ဖို့တစ်ခုတည်းအပြုအမူ assay ၏အသုံးပြုမှု Transgene ကြွက်များတွင်အထူးသဖြင့်အကျိုးရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖြင့်လိုက်ပါသွားကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုခြီးမွှောကျပါပွီ NAc နှင့် dorsal striatum ၏ dynorphin / ပစ္စည်းဥစ္စာ, P-ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ΔFosB၏မြင့်မားသောစကားရပ်နဲ့ကြွက်ဟာ KOR agonist ၏စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့ (ဆန္ဒရှိ) သက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားတွေ့ရှိခဲ့ U50488, စွဲမှမွငျ့မားသောအားနည်းချက်၏ထူးခြားချက်ကိုပြသပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်တိုးပွားလာတဲ့ phenotype ထုတ်လုပ်။
23 သွေးဆောင်၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းΔFosB (11A လိုင်း) ဖော်ပြ bitransgenic အထီးကြွက်တစ်ဦး tetracycline-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်စနစ် (ကိုအသုံးပြုပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်37) ။ အဆိုပါ NSE-tTA နှင့် TetOP-ΔFosB Transgene doxycycline ်ရေပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြတင်ဆောင်လာသောအထီးကြွက် (DOX, 100 μg / ml; Sigma, စိန့်လူးဝစ် MO ကို) ။ စမ်းသပ်မှု striatum (ΔFosB-ON ၏ dynorphin-အပြုသဘောအာရုံခံအတွင်း TetOp-mediated ΔFosB Transgene စကားရပ်ထဲမှာတည်ငြိမ် 13-ခြံတိုးခွင့် DOX ထံမှ7ကြွက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ရှစ်ပတ်ကစတင်ခဲ့ပြီး; တွေ့မြင် 10, 37, 38) ။ က Eleven ကြွက်စမ်းသပ်ချက်များ၏ကြာချိန်များအတွက် DOX အပေါ်ကျန်ရစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (ထိန်းချုပ်ရေး) ဖွဲ့စည်း။ အဆိုပါကြွက်များကိုအနည်းဆုံး 57 သားစဉ်မြေးဆက်များအတွက် C6BL / 12 နောက်ခံမှ backcrossed ခဲ့ littermates ရှိ. , အတူတစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum (12 မှ7လေး: 00 pm တွင် 7) သံသရာတစ် 00 ဇအလင်းပေါ်အစားအသောက်နှင့်ရေရရှိမှု။ ထို့အပြင် NSE-tTA Transgene တင်ဆောင်လာသော9ကြွက်တစ်ခုသာဒုတိယထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည် ဟူ. ၎င်း, သူတို့ကြိုတင် (OFF-DOX) နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မှ ~ 8 ပတ် DOX ကနေဖယ်ရှားပြီးတော့, DOX အပေါ်ထမြောက်ကြသည်။ လုပျထုံးလုပျနညျးကနျြးမာရေး၏ 1996 အမျိုးသား Institute (NIH) နဲ့အညီကောက်ယူခဲ့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကိုလမ်းညွှန် နှင့် McLean ဆေးရုံမှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ။
ရ Transgene overexpression (FosB များအတွက် immunuohistochemistry ကအတည်ပြုခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1) ။ Bitransgenic ကြွက်ယဇ် ပူဇော်. 0.1 M ကဖော့စဖိတ်-buffered ဆားနှင့် 4% paraformaldehyde နှင့်အတူ trascardially perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက် (ဖယ်ရှားခံရ postfixed နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ cryoprotected ခဲ့ကြသည်14, 38) ။ တစ်ရှူး 30 မီလီမီတာကဏ္ဍများသို့ Coronal လေယာဉ်ပေါ်လိုက်သည်ကိုများနှင့်အပိုင်းတစ် FosB antibody ကို (SC-48, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA) ကို အသုံးပြု. immunostained ခဲ့သည်။ Diaminobenzidine အစွန်းအထင်း FosB အပြုသဘောဆဲလ်တွေမြင်ယောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံရိပ်တွေတစ်ခု Zeiss image 1 image ကိုဆနျ့ကငျြဘဏုသုံးပြီးဝယ်ယူခြင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ် Axiovison software ကို (Carl Zeiss အမေရိကန်, Peabody, MA) ကို အသုံးပြု. ဖမ်းယူခဲ့သည်။
ΔFosB၏ overexpression ဖေါ်ပြခြင်း bitransgenic ကြွက်တွေကနေကိုယ်စားလှယ် micrographic ။ FosB များအတွက်နျူကလီးယားတံဆိပ်ကပ် doxycycline (ညာ) မပေးသောများထက် doxycycline (လက်ဝဲ panel က) တွင်ထိန်းသိမ်းထားထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွေမှာအနိမ့်သည်။ AC = anterior commisure; NAc ...
(; Sigma 25-28 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့် medial forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး (MFB မှ stereotactically ညွှန်ကြား monopolar လှုံ့ဆော်လျှပ်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျး; ကြွက် (80-10 ဆ) တစ်ဦး ketamine-xylazine အရောအနှောတစ်ခု intraperitoneal (IP) ဆေးထိုးနှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်မီလီမီတာအတွက် bregma ကနေ AP: -1.9, ML: -0.8, DV: -4.8 အီရတ်တွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, Paxinos နှင့် Franklin ၏ Atlas သည်နှင့်အညီ, 2nd ed ။ , 2001) ။ တစ်ဦးတည်းတပတ်ပြန်လည်နာလန်ထူကာလပြီးနောက်ကြွက်နေ့စဉ်တစ်နာရီအစည်းအဝေးများ (စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဆွဘို့အတုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်39) ။ stimulation လက်ရှိ 60 ရက်ဆက်တိုက်တည်ငြိမ်တုံ့ပြန် (6 တုံ့ပြန်မှု / မိနစ်± 3) ကိုထောက်ပံ့မယ်လို့နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးညှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်တန်ဖိုးတစ်ခု "အနည်းဆုံးလက်ရှိ" ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်နှင့်ဤချဉ်းကပ်နည်း (ဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ Basal sensitivity ကိုအတွက် mutation-သွေးဆောင်ကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီး40) ။ အနည်းဆုံးလက်ရှိတစ်ဦးချင်းစီ mouse ကိုအဘို့ကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကြွက်ထို့နောက် 15 မှတ်တမ်း (အမိန့်ဆင်းအတွက်တင်ပြ 0.05 ဆွလှိုင်းများ၏တဦးတည်းတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်10 တဆယ် 50 စက္ကစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းယူနစ်ခြေလှမ်းများ) ။ စမ်းသပ်မှုတုံ့ပြန်အားဖြည့်မထားတစ်5စက္ကအချိန်ထွက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည် non-ဆက်ပြောပါတယ်ဆွပေးထားခဲ့သည်ဘယ်မှာ5ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကရှေ့ပြေးခဲ့ကြသည်။ 15 စမ်းသပ်မှုတွေ (သို့မဟုတ် "pass ') ၏အသီးအသီးအစုံတင်ဆက်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသီးအသီး 50 စက္ကရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကြွက်3ကျော် stably အမြင့်ဆုံး 4-6 လှိုင်းမှတဆင့်တုန့်ပြန်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရေး၏ 7-6 တပတ်သင်တန်းကျော်, ကိုအသုံးပြုလှိုင်းများ၏အကွာအဝေးညှိခဲ့ (လေ့ကျင့်ရေး၏ 90 မိ) ဖြတ်သန်းပါတယ်။ (ICSS တံခါးခုံ, သို့မဟုတ် 'theta-သုည') တုံ့ပြန်ထောက်ခံကြောင်းနိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (၏အနည်းဆုံး-ရင်ပြင်လိုင်း အသုံးပြု. တွက်ချက်ခဲ့သည်36, 41) ။ တိရိစ္ဆာန်များ (10 ရက်ဆက်တိုက်ကျော် 5% ±) တည်ငြိမ်ယုတ် ICSS တံခါးရှိသည်ဖို့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အခါ, ICSS တံခါးခုံပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်။
ကိုကင်း HCl နှင့် (±) -trans ဆိုတဲ့-U50488 methanesulfanoate (Sigma) 0.9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့် 10 ml / ကီလိုဂရမ်တစ် volume ထဲမှာ IP ကိုထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ကြွက်မူးယစ်ဆေးကုသမှုမပြုမီချက်ချင်းဖြတ်သန်းနှင့်ဒုတိယနှင့်တတိယ pass ကနေတံခါးခုံပုအခြေခံ (တံခါးခုံခြင်းနှင့်အကျယ်ချဲ့တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်) parameters များကိုရရှိရန်ပျမ်းမျှ3မှတဆင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို mouse ကိုထို့နောက်မူးယစ်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်၏တစ်ဦးဆေးထိုးခံ ယူ. 15 မိကိုချက်ချင်းအောက်ပါထိုးဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ Bitransgenic ကြွက်တွေကိုကင်းများ၏ဆေးများပေးခဲ့ (0.625-10 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ် U50488 တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုနိုင်ရန်အတွက် (0.03-5.5 / ကီလိုဂရမ် mg) ။ Off-DOX ကြွက်သာကင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်ကုသမှု mouse ကိုကြိုတင်ကုသရာမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်းနှင့် conditional မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ minimize လုပ်ဖို့ကြောင်းသေချာစေရန်ရှေ့နေ့၌မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူစမ်းသပ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ တစ်ဦးကနှစ်ခုရက်သတ္တပတ်ကြားကာလကိုကင်းနှင့်အကြားပေးထားခဲ့သည် U50488 စမ်းသပ်ချက်။ အထက်အမျှတုံ့ပြန်တည်ငြိမ်အခြေခံပြသရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ Group မှခြားနားချက်များကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် t-test (နိမ့်ဆုံးလက်ရှိအတိုင်းအတာ), ANOVAs (တံခါးခုံများနှင့်အမြင့်ဆုံးနှုန်းအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ); သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုပြီးထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ (Dunnett ရဲ့စမ်းသပ်မှု) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌, နှိုင်းယှဉ်ယာဉ်-ကုသအခြေအနေယုတ်ကှာခွားမဟုတ်ဘူးမူးယစ်ဆေး-ကုသအခြေအနေများအတွက်ကိုဆိုလိုသောတရားမဝင်သောအယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်း (ICSS အတွက်အနိမ့်ဆုလာဘ်တံခါးမှလူသိများသည်သောကြောင့်42), မော်တော်ယာဉ်မှနှိုင်းယှဉ်ကင်းဆုလာဘ်တံခါးခုံကိုလျှော့ချမယ်လို့သောအယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပြောင်းပြန် Kappa agonists (ICSS အတွက်ဆုလာဘ်တံခါးခြီးမွှောပြခဲ့ကြသောကြောင့်,23), နှိုင်းယှဉ်သောအယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံမော်တော်ယာဉ်မှဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည် U50488 အလားတူဆုလာဘ်တံခါးခြီးမွှောလိမ့်မယ်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားမှုကို (တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကအတည်ပြုခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2).
ကိုယ်စားလှယ် micrographic ICSS (မြှား) အတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနေရာချထားလှုံ့ဆော်သရုပ်ဖော်သည်။ LHA နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဧရိယာ =; FX = fornix ။ စကေးဘား = 250 μm။
ΔFosB overexpression နှင့်နိမ့်ဆုံးလက်ရှိအစီအမံ
အားလုံးကြွက်လျှင်မြန်စွာ ICSS အပြုအမူဝယ်ယူခြင်းနှင့် MFB ဆွဘို့အမြင့်မားသောနှုန်းမှာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအုပျစု striatum အတွက်ΔFosB overexpressing ကြွက်အကြားနိမ့်ဆုံးခုံများတွင်ကွဲပြားမှုနှင့် NAc (ΔFosB-ON) နှင့် DOX (ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်ထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုရှိခဲ့သည်; t(22)= 0.26 [NS] သိသိသာသာမပါ) (သဖန်းသီး။ 3) ဒီမျိုးဗီဇကိုင်တွယ်ကိုယ်တိုင်ကအခြေခံအခြေအနေများအောက်တွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic ဆွ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုမသက်ရောက်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
သွေးဆောင်ΔFosB overexpression ICSS ကိုထောကျပံ့ရန်လိုအပ်သည်နိမ့်ဆုံးလက်ရှိအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ပါတယ်။ Scatterplot တစ်ဦးချင်းစီကြွက်များတွင်ကြံ့ခိုင် ICSS အပြုအမူ (60 ±6တုံ့ပြန်မှု / မိနစ်) ကူညီပံ့ပိုးရန်လိုအပ်ယုတ်နိမ့်ဆုံးလက်ရှိ (အရက်ဆိုင်) (ဖြည့်စက်ဝိုင်း) ကိုပြသ ...
ΔFosB overexpression နှင့်ကိုကင်းဆိုးကျိုးများ
ကိုကင်း (ICSS မှုနှုန်း-အကြိမ်ရေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ဘယ်ပြဆိုင်းစေကြွက်အပေါငျးတို့သအုပ်စုများအတွက် ICSS တံခါးခုံကိုဆိုလိုတာလျော့နည်းသွားသင်္ဘောသဖန်း။ 4A, B,) ။ ယုတ် ICSS တံခါးခုံပေါ် ANOVA (ကိုကင်းထိုး၏အဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားတဲ့ 2-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ: ΔFosB-ON ကြွက်တွေကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံခဲ့ကြF(5,65)= 11.20, P<0.01) နှင့် DOX ကုသမှု (F(1,13)= 6.23, P<0.05), ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမထိုး× DOX အပြန်အလှန် (F(5,65)= 0.87, NS) ။ အုပ်စုတိုင်းအတွင်းဆားမော်တော်ယာဉ်ကုသမှုနှင့်အတူ pre-စီစဉ်ထားထူးခွားသညျ့ (Dunnett ရဲ့စမ်းသပ်မှု) ΔFosB-ON ကြွက် (ကဖော်ပြn= 8) (ကထိုး 1.25 ၏မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ထိန်းချုပ်ရေး (ON-DOX) ကြွက်များတွင်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်သော်လည်း≥10 / ကီလိုဂရမ် MG ဆေးများမှာ ICSS တံခါးခုံအတွင်းသိသိသာသာလျှော့ချပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 4C) ။ အများဆုံးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA ကင်းထိုး၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားတစ်ဦးက 2-လမ်း (F(5,65)= 3.89, P<0.05) ။ အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရှိဆားငန်ယာဉ်ကုသမှုနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်ခြားနားချက်များကကိုကင်းသည် osFosB-ON ကြွက်များတွင်≥5 mg / kg ဆေးများတွင်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း၊သင်္ဘောသဖန်း။ 4D) ။ DOX ကုသမှုမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရှိခဲ့သည်F(1,13)= 1.56, NS), မထိုး× DOX အပြန်အလှန်ရှိခဲ့ (F(5,65)= 0.43, NS) ။ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် OFF-DOX အုပ်စုများဆုလာဘ်တံခါးမရှိခြားနားချက်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဦးတည်း DOX ကုသမှု ((10 / ကီလိုဂရမ် mg) စမ်းသပ်ပြီးကင်း၏ဆေးထိုးတုံ့ပြန်မသက်ရောက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 4C, inset; t(14)= 0.27, NS), သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်အများဆုံးနှုန်းထားများ (သင်္ဘောသဖန်း။ 4D, inset; t(14)= 0.34, NS) ။
သွေးဆောင်ΔFosB overexpression ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်. (A, B) အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာတစ်ဦးချင်းကိုယ်စားလှယ်ကြွက်အဘို့အမှုနှုန်း-အကြိမ်ရေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုΔFosB-ON အတွက်ပိုကြီးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ဘယ်ပြဆိုင်းသရုပ်ပြ ...
ΔFosB overexpression နှင့် U50488 အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အဆိုပါ KOR agonist U50488 ΔFosB-ON ကြွက်မူးယစ်ဆေးမှအာရုံမခံစားနိုင်သောခဲ့ကြသည်သော်လည်း (ဤအုပ်စုများ၏နှုန်း-အကြိမ်ရေ function ကိုအတွက်ညာဘက်ဆိုင်းစေထိန်းချုပ်ရေးကြွက်တွေမှာယုတ် ICSS တံခါးတိုးလာသင်္ဘောသဖန်း။ 5A, B,) ။ ယုတ် ICSS တံခါးခုံပေါ်တစ်ဦးက 2-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA (မူးယစ်ဆေးဝါးထိုး၏အဓိကသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြF(6,60)= 3.45, P<0.01), DOX ကုသမှု (F(1,10)= 18.73, P<0.01) နှင့်သိသိသာသာထိုး× DOX အပြန်အလှန် (F(6,60)= 2.95, P post ကို hoc စမ်းသပ်ခြင်း (Dunnett ရဲ့စမ်းသပ်မှု), ဆားမော်တော်ယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်, ထိုပြသ U50488 (5.5 / ကီလိုဂရမ် mg) (ထိန်းချုပ်ရေးကြွက်တွေမှာ ICSS တံခါး၏သိသာထင်ရှားသောမြင့်တက်ထုတ်လုပ်n= 4) ဒါပေမဲ့ (ΔFosB-ON ကြွက်မသက်ရောက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 5C) ။ ထို့အပြင်, ဒီထိုးမှာအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိ၏။ အများဆုံးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းအပေါ်တစ်ဦးက 2-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA (ဆေးထိုးမရှိအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(6,60)= 1.95, NS) သို့မဟုတ် DOX ကုသမှု (F(1,10)= 4.66, NS [P= 0.06]), မထိုး× DOX အပြန်အလှန် (ရှိခဲ့F(6,60)= 1.31, NS) (သင်္ဘောသဖန်း။ 5D) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကြောင့်ညွှန်ပြ U50488 သိသိသာသာကိုစမ်းသပ်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်တုံ့ပြန်မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
သွေးဆောင်ΔFosB overexpression လုပ်ကွက်၏ anhedonic ဆိုးကျိုးများ U50488. (A, B) အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာတစ်ဦးချင်းကိုယ်စားလှယ်ကြွက်အဘို့အမှုနှုန်း-အကြိမ်ရေလုပ်ဆောင်ချက်များကိုညာဘက်ပြသရုပ်ပြ ...
ကျနော်တို့ NAc အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် overpression နှင့်အတူကြွက်နှင့်အခြား striatal ဒေသများတွင်ကင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံနှင့် KOR agonist ၏ prodepressive ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းပြသ U50488 သာမန်ကြွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ.
ဤရွေ့ကား data တွေကိုမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်လက်ရှိစာပေနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အတော်ကြာအရေးကြီးသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာတိုးချဲ့။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အပေါ်ΔFosB overexpression ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူယခင်အလုပ် (ရာအရပျအေးစက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး Paradigm ကိုအသုံးပြု10, 11) ။ ICSS စမ်းသပ်ချက်ကနေဒေတာကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry ၏ sensitivity ကိုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဦး '' ကို real-time '' အညွှန်းကိန်းပေးခွငျးအားဖွငျ့ဤလုပ်ငန်းကိုဖြည့်စွတ်။ ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများ, ဥပမာ (pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး (ဥပမာ, ကိုကင်း) ကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ပြခဲ့ကြ U50488MFB ဆွ၏) အကြိုးသက်ရောက်မှု (24); ICSS အရှင်တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာနေစဉ် hedonic ပြည်နယ် quantifying များအတွက်နည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဖြစ်လူသိများကြသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (အသီးသီး, ဆိုလိုသည်မှာအနိမ့်နှင့်အမြင့်မားတဲ့တံခါးခုံ) ဆနျ့ကငျြဘထုတ်လုပ်သောကြောင့်ကြွက် ICSS အတွက်လက်ငင်းဘယ်မှာနိမ့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှုန်းထားများတတျနိုငျသ, ထိုပါရာဒိုင်းကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော, လုပ်နိုင်တဲ့မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုထက်ကဤပြည်နယ်များ dissociate နိုင်ပါတယ် (မွတ်မပြေနိုင်သောသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုများပေါ်ပေါက်လာဖြစ်စေညွှန်ပြ36) ။ ထို့အပြင် ICSS အလားအလာမူးယစ်ဆေးကုသမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (ဆိုလိုသည်မှာ, နေရာအေးစက်) ကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုကြသည်ဂန္ထဝင်အေးစက် Paradigm အတွက်လေ့လာသင်ယူတုံ့ပြန်မှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စကားရပ်အပေါ်ကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါ confounds ရှောင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ICSS တံခါးခုံကိုဒေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူးယစ်ဆေးသွေးဆောင်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့သော overexpression အတွက် littermate ထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်ဆေးများမှာ ICSS တံခါးခုံအတွင်းသိသိသာသာလျှော့ချထုတ်လုပ်ကတည်းကΔFosB၏ induction, ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါΔFosB-ON ကြွက်လည်းကင်း၏မြင့်မားသောဆေးများမှာတုံ့ပြန်အများဆုံးနှုန်းထားများအတွက်တိုးပြသခဲ့သည်ဆိုတဲ့အချက်ကို ICSS တံခါးခုံပေါ်ΔFosB overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတခုမွငျ့မား locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည် (ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်43) ။ ဤသည်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလားအလာမရှိပါ။ ပထမဦးစွာ theta-0 တိုင်းတာခြင်းများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းလမ်းဆွအကြိုးဖွစျလာမှာအကြိမ်ရေကိုခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်တစ်ဦးအနည်းဆုံးရင်ပြင်လိုင်းအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဆုတ်ယုတ် algorithm ကိုဈေးလျှော့သောကြောင့်အစွန်းရောက်တန်ဖိုးများ, ကတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်ကုသမှု-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲရန်အနည်းဆုံးအထိခိုက်မခံလျက်ရှိ၏ (ကြည့်ရှုက M-50 တစ်ခု ED-50 ဆေးဝါးဗေဒအတွက်အလားတူသောအတိုင်းအတာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမတူဘဲတစ်ယောက်တည်းတုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်မြားတှငျပွောငျးလဲတံခါးခုံအတွင်း artifactual ဆိုင်းစေနိုင်ပါတယ် 36, 41, 44, 45) ။ သူတို့အားထက်ဒုတိယ, အခြေခံတန်ဖိုးများကိုအထက်အများဆုံးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းအတွက်တိုးသာကင်း၏အမြင့်ဆုံးကြိမ်မှာထင်ရှားဖြစ်ကြ Two-ခေါက်ပိုမိုမြင့်မားΔFosB-ON တိရစ္ဆာန်များ၏ ICSS တံခါးထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာနိမ့်နေသောအချိန်။ ICSS တံခါးခုံပေါ်ΔFosB၏သက်ရောက်မှုကြောင့် mutation ၏ Non-တိကျတဲ့သက်ဝင်သက်ရောက်မှုမှဖြစ်လျှင်နောက်ဆုံးတွင်သည်, ကြွက်လည်းနှုန်းထားများကိုထောကျပံ့ဖို့အောက်ပိုင်းယုတ်နိမ့်ဆုံးလက်ရှိအဖြစ်ထင်ရှား, MFB ဆွသူ့ဟာသူ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမို sensitivity ကိုပြသနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ 60 ±6တုံ့ပြန်မှုများ / မိနစ်, ဒါမှမဟုတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူကုသမှုကိုအောက်ပါအခြေခံအများဆုံးတုန့်ပြန်မှုနှုန်းအတွက်တိုးမြှင့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသက်ရောက်မှုများဖြစ်စေမရှိသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ΔFosB overexpression ယင်း (အနိမ့်မှအမြင့်ဆေးများမှာ) အကြိုးနှငျ့ (သာမြင့်သောဆေးများမှာ) လှုံ့ဆော်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှမွငျ့မား sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆိုးကျိုးများတဲ့အလားတူပုံစံသည်ယခင်ကကိုနောက်ကောက်ကဲ့သို့နိမိတ်လက္ခဏာများ (ကိုထုတ်လုပ်မယ့် mutation နှင့်အတူကြွက်တွေအစီရင်ခံထားသည်40).
စိတ်ဝင်စားစရာΔFosB overexpression တံခါးခုံ-မြှ, လိုလားသူစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်း U50488။ ငါKOR agonist ကုသမှုအဖြစ် nasmuch (စိတ်ဖိစီးမှုအချို့သက်ရောက်မှုတူတဲ့နိုင်ပါတယ်25-28), ဒီတွေ့ရှိချက်ခံနိုင်ရည်တစ် putative နိမိတ်လက္ခဏာရှိ၏ အကယ်စင်စစ်ΔFosB overexpression sucrose preference ကိုနှင့်လူမှုရေးအပြန်အလှန်အပေါ်နာတာရှည်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုများစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများမှခံနိုင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (14, 46).
စိတ်ဖိစီးမှု (dynorphin ၏စကားရပ် elevates47, 48), နှင့် KOR ရန် (တူသော-လက္ခဏာနှင့်ဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထုတ်လုပ်ရန်20, 32, 47, 49) ။ ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အချက်လွှတ် corticotrophin နှင့်ဆက်စပ်တွေကိုမှအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက် KOR ရန်သို့မဟုတ် dynorphin ဗီဇနောက်ကောက်ပိတ်ဆို့နေကြသည်အဖြစ်ထိုမှတပါး, စိတ်ဖိစီးမှုအတူသောဆန္ဒရှိ hypothalamic-pituitary-adrenal ၏အစိတ်အပိုင်းဝင်ရိုး activation, dynorphin ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (30). ဤအစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုအဆိုပါကြွက်ဟာ striatum ၏အာရုံခံ dynorphin အတွက်ရွေးချယ်ΔFosB overexpression ပြသ။ ဒီအလှည့် (ဤအာရုံခံအတွက် dynorphin စကားရပ်ကိုလျော့နည်းစေ38), ဦးနှောက် KOR စနစ်များ၏အခြေခံ function ကိုလျှော့ချဖို့မျှော်လင့်နိုင်ကာသက်ရောက်။ ထို့အပြင် KOR activation DA (dopamine များလွှတ်ပေးရန် attenuates ကြောင့်၎င်း, 22, 50), ICSS ထောက်ပံ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများနေတဲ့ transmitter ကို (51-53ΔFosB overexpressing ကြွက်တွေကိုကင်းဆုလာဘ်တိုးမြှင် sensitivity ကိုပြသအဘယ်ကြောင့်), ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ဤအကြွက်တွေ exogenous KOR agonists ၏ prodepressive ကဲ့သို့သက်ရောက်မှုတစ်ခုထုံထိုအတူ dynorphin သေံ attenuated သောအချက်ကို mutation ဦးနှောက်ထဲမှာ '' Anti-ဆုလာဘ် '' စနစ်များကိုထေမိရန်တတ်နိုင်ကြသည်ကြောင်း neuroadaptatons ၏တစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန့် set ကိုထုတ်လုပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက် (54).
မည်သို့ပင်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကမူးယစ်ဆေးမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းရှိမရှိ၏, ΔFosBနှင့် dynorphin ၏ induction neuroadaptations ဆန့်ကျင်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ΔFosB (အပြုသဘော pharmacological နှင့်သဘာဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးမှ sensitivity ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ပုံပေါ်10, 11, 15) ။ အဆိုပါ dynorphin-KOR စနစ်, သို့သော်လူသားများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် prodepressive ကဲ့သို့ anhedonia ၏ဒြပ်စင်ပါဝင်ကြောင်းပြည်နယ်များ, dysphoria နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်သွေးဆောင်ပုံ (19, 21, 35, 55).
nonpathological အခြေအနေများအောက်တွင်ဤအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် hedonic သေံအပေါ်ပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်အစားထိုးချေတဲ့ homeostatic ကဲ့သို့တုံ့ပြန်ရရှိလာတဲ့အချင်းချင်း offset လိမ့်မည်။ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်နှင့်အတူပြောင်းပြန်ကွဲပြားကြောင်းအထောက်အထားအလငျး၌14, 56, 57), ΔFosB GluR2 ၏တိုးမြှင်စကားရပ်ကနေတဆင့်, ဤဆဲလ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချခြင်းဖြင့် dysphoria-inducing ဖိအားဆန့်ကျင်အကာအကွယ်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည် (10), အရာ GluR2 ပါဝင်သော, ကယ်လစီယမ်-impermeable AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှာ (အတွင်းပြန်လည်သုံးသပ် 58).
ဆနျ့ကငျြ, dynorphin သို့မဟုတ် KOR agonists အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများထိတွေ့အတူလိုက်ပါကြောင်း DA ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့် attenuate စေခြင်းငှါ (59). လူသားများတွင်စွဲများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာမကြာခဏ (ဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများက comorbid နှင့် precipitated နေကြတယ်60-62) ။ ဆနျ့ကငျြ, ကြွက် overexpressing ΔFosB၏ phenotype တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးရှာကြံပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုများစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုမှခံနိုင်ရည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ dissociation အခြေခံအဆိုပါယန္တရားများမသိရသေးသော်လည်း, ဤကြွက်အားဖြင့်ပြသΔFosB overexpression ၏ကန့်သတ်ပုံစံကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဓာတ်လှေကား striatal ΔFosBနှင့် dynorphin အတွက်နောက်ဆက်တွဲလျှောက်လျော့နည်း (သာနှစ်ဦးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုနှင့်ဖိစီးနှင့်အတူလိုက်ပါသောမြောက်မြားစွာ neuroadaptations ဖြစ်ကြ၏63, 64) ။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကအပြည့်အဝစွဲ၏ comorbid ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများအစုံနှင့်စိတ်ကျရောဂါမျိုးပွားဖို့မဖြစ်နိုင်များမှာ။ ဤလေ့လာမှုများသာΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြေရှင်းရန်ကြောင်းအလေးပေးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဖြစ်ပြီး, ပုံမှန်အခြေအနေတွေအောက်မှာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ Full-အရှည် FosB အပါအဝင်ကဒီမှာလေ့လာခဲ့မရကအခြား Fos မိသားစုပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှာပိုယာယီတိုး, (စေ9).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကြှနျုပျတို့သညျဤမျိုးရိုးဗီဇခြယ်လှယ်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ပြΔFosB overexpressing Transgene ကြွက်တွေမှာ ICSS ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းဒီနေဖြင့် KOR activation ၏ prodepressive သက်ရောက်မှုမှခုခံပေးအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရ U50588။ အဆိုပါ dynorphin-KOR စနစ်ကစိတ်ဖိစီးမှုများကိုထိခိုက်အကျိုးဆက်များတစ် key ကိုဖျန်ဖြေသောကွောငျ့ဤဒေတာကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖိအားတုန့်ပြန်လျှော့ချနေစဉ်အတွင်းΔFosBဆုလာဘ် sensitivity ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ကဲ့သို့သောတိုးမြှင့်ΔFosBစကားရပ်အချို့အခြေအနေတွေအောက်မှာခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်လိမ့်မည်။
ဒီလေ့လာမှုက (JWM, MH026250 နှင့် DA51399 မှ EJN နှင့် MH008227 မှ WAC မှ DA063266) မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute မှခဲ့သည်။
အကျိုးစီးပွားဖော်ထုတ်ခြင်း / ပဋိပက္ခဖြစ်
အတိတ်3နှစ်တွေဒေါက်တာ Carlezon HUYA Biosciences နှင့် Myneurolab.com ထံမှလျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူကဤအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အလုပ်ဆက်စပ်မဟုတ်အများအပြားမူပိုင်ခွင့်နှင့်မူပိုင်ခွင့် applications များရရှိထားပါသည်။ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခဖွဲ့စည်းရန်အဖြစ်ကိုရိပ်မိစေခြင်းငှါအဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာ Nestler PsychoGenics နှင့် Merck သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုအကြံပေးသည်။ ဒေါက်တာ Muschamp ဒေါက်တာ Robison နှင့်မစ္စ Nemeth မျှပြီးတော့ biomedical ဘဏ္ဍာရေး Interstate သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအလားအလာပဋိပက္ခများကိုသတင်းပို့ပါ။
1 ။ B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ Mogenson GJ, ဂျုံးစ် DL, Yim CY ။ အဆိုပါ limbic စနစ်နှင့်ယင်းမော်တာစနစ်ကအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interface ကို: လှုံ့ဆျောမှုကနေအရေးယူရန်။ prog Neurobiol ။ 1980; 14: 69-97 ။ [PubMed]
3 ။ Carlezon WA, Jr ကသောမတ်စ် MJ ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဇီဝအလွှာ: တစ်နျူကလိယ accumbens လှုပ်ရှားမှုယူဆချက်။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 ပျော့ပျောင်း 1: 122-132 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Pennartz CM, Groenewegen HJ, Lopes da Silva FH ။ , အမူအကျင့် electrophysiological နှင့်ခန္ဓာဗေဒအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးပေါင်းစည်းမှု: အဆိုပါနျူကလိယ function ကွဲပြားအာရုံခံ ensembles တစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ် accumbens ။ ProgNeurobiol ။ 1994; 42: 719-761 ။ [PubMed]
5 ။ ပီယပ် RC, Vanderschuren LJ ။ အလေ့အကျင့်ကန်: ကိုကင်းစွဲထဲမှာအရိုးစွဲအမူအကျင့်များအာရုံကြောအခြေခံ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2010; 35: 212-219 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-1244 ။ [PubMed]
7 ။ Chen က J ကို, et al Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995; 48: 880-889 ။ [PubMed]
8 ။ McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ မော်လီကျူးဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
9 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ။ တော်ဝင် Society က B ကို၏ဒဿနအရောင်းအဝယ်: ဇီဝသိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
11 ။ Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 2488-2493 ။ [PubMed]
12 ။ Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို, Duman RS, et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
13 ။ Nikulina EM, Arrillaga -Romany အဘိဓါန်ငါ Miczek Ka, Hammer RP, ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက် mesocorticolimbic အဆောက်အဦများအတွက် Jr Long-တည်တံ့အပြောင်းအလဲတချို့: ။ mu-opioid အဲဒီ receptor mRNA နှင့် FosB / DeltaFosB immunoreactivity အချိန်သင်တန်း။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 27: 2272-2284 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Vialou V ကို, Robison AJ, LaPlant QC, Covington သူ, Dietz DM, Ohnishi yn, et al ။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက်ΔFosBစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2010; 13: 745-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ Wallace DL, Vialou V ကို, Rios L ကို, Carl-Florence TL, Chakravarty S က, Kumar ကတစ်ဦး, et al ။ သဘာဝဆုကြေး-Related အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ Accumbens အတွက် FosB ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 10272-10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ ခွံရှိ VL, Chakravarty S က, Nestler EJ, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2009; 8: 442-449 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ အိုး KK, Frohmader KS, Vialou V ကို, Mouzon အီး, Nestler EJ, Lehman MN, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010; 9: 831-840 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Pfeiffer တစ်ဦးက, Brantl V ကို, Herz တစ်ဦးက, Emrich HM ။ Psychotomimesis Kappa opiate receptors ကကမကထပြုခဲ့။ သိပ္ပံ။ 1986; 233: 774-776 ။ [PubMed]
19 ။ Wadenberg ML ။ spiradoline ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 2003; 9: 187-198 ။ [PubMed]
20 ။ Mague SD က။ သည်အထိအတွက်အတင်းအဓမ္မရေကူး Test အတွက် Kappa -Opioid receptor ရန်၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants-လိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 2003; 305: 323-330 ။ [PubMed]
21 ။ Todtenkopf က MS, Marcus JF, Portoghese PS, Carlezon WA ။ , ကြွက်များတွင် intracranial Self-stimulation အပေါ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ligands ၏ Jr အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172: 463-470 ။ [PubMed]
22 ။ Carlezon WA, Jr က Beguin ကို C, DiNieri ဂျာ Baumann MH, Richards MR, Todtenkopf က MS, et al ။ ကြွက်များတွင်အပြုအမူနှင့် neurochemistry အပေါ်တစ်ဦးက salvinorin အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2006; 316: 440-447 ။ [PubMed]
23 ။ Tomasiewicz H ကို, Todtenkopf M က, Chartoff အီး, Cohen ကို B ကို, ဦးနှောက်စိတ်ကြွဆေးဆုကြေး၏ Carlezonjr ဒဗလျူအဆိုပါ Kappa-Opioid Agonist U69,593 လုပ်ကွက်ကင်း-သွေးဆောင်စွမ်းရည်မြှင့်။ ဟားဗတ်။ 2008; 64: 982-988 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Dinieri ဂျာ Nemeth CL, Parsegian တစ်ဦးက, Carl T က, Gurevich VV, Gurevich အီး, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွင်းစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း function ကို၏သွေးဆောင်နှောင့်အယှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေမှာကြိုးနဲ့ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများမှပြောင်းလဲ sensitivity ကို။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 1855-1859 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ McLaughlin JP, Marton-Popovici M က, Chavkin C. Kappa opioid အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇပြတ်တောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု prodynorphin ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 5674-5683 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ McLaughlin JP, မြေ BB လီက S, Pintar je, U50,488 တူတဲ့အားဖြင့် Kappa opioid receptors ၏ Chavkin C. မတိုင်မီက activation ကိုကင်းရာအရပ်ကို preference ကိုအေးစက် potentiate ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုထပ်ခါတလဲလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 787-794 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ McLaughlin JP လီက S, Valdez J ကို, Chavkin က TA, Chavkin C. လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဟာ endogenous Kappa opioid သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1241-1248 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ ကယ်ရီ AN, လီယွန်လေး, ရှေး CF, Dunton အို McLaughlin JP ။ Endogenous Kappa opioid activation သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လိုငွေပြမှု mediates ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 4293-4300 ။ [PubMed]
29 ။ Chavkin ကို C, ယာကုပ်လျှင်, တိန်းအေ Dynorphin အဆိုပါ Kappa opioid အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် endogenous ligand ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ။ 1982; 215: 413-415 ။ [PubMed]
30 ။ မြေယာ BB, Bruchas MR, Lemos JC, Xu M က, Melief EJ, Chavkin C. စိတ်ဖိစီးမှု၏ dysphoric အစိတ်အပိုင်း dynorphin Kappa-opioid စနစ်၏ activation အားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 407-414 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ Bruchas MR, Schindler AG က, Shankar H ကို, Messinger ပစ, Miyatake M က, မြေ BB, et al ။ serotonergic အာရုံခံအတွက်ရွေးချယ်p38α MAPK deletion 'စိတ်ကျရောဂါနှင့်စွဲလမ်း၏မော်ဒယ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-ခံနိုင်ရည်ထုတ်လုပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ (စာနယ်ဇင်းများတွင်) [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Pliakas လေး, Carlson RR, Neve RL, Konradi ကို C, Nestler EJ, Carlezon WA ။ , Jr ALTER တုန့်ပြန်ကင်းရန်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်မြင့်မားသောစခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်အတူဆက်စပ်အတင်းအကျပ်ရေကူးစမ်းသပ်မှုအတွက် immobility တိုးတက်လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 7397-7403 ။ [PubMed]
33 ။ Beardsley pm တွင်, Howard JL, Shelton ဟာ KL, ကာရိုး FI ။ ကိုကင်း-ရှာကြံကင်း Prime နှင့်ကြွက်များအတွက်၎င်း၏လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှု vs footshock ဖိအားများကသွေးဆောင်၏ reinstatement အပေါ်ဝတ္ထု Kappa opioid အဲဒီ receptor ရန်, JDTic ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005; 183: 118-126 ။ [PubMed]
34 ။ Knoll ကို AT, Meloni ဥပမာသောမတ်စ် JB, ကာရိုး FI, Carlezon WA ။ ကြွက်များအားနားမလည်ခြင်းနှင့်သင်ယူကွောကျရှံ့ခွငျး၏ & Models အတွက်κ-Opioid receptor ရန်၏ Anxiolytic-လိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 2007; 323: 838-845 ။ [PubMed]
35 ။ Knoll ကို AT, Carlezon WA ။ , Jr Dynorphin, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1314: 56-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Carlezon WA, Chartoff Eh ။ Intracranial Self-stimulation (ICSS) လှုံ့ဆျောမှု၏ neurobiology လေ့လာဖို့ကြွက်၌တည်၏။ သဘာဝတရား Protocols ။ 2007; 2: 2987-2995 ။ [PubMed]
37 ။ Chen က J ကို, Kelz ကို MB, Zeng, G, Sakai က N ကို, Steffen ကို C, Shockett PE, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol Pharmacol ။ 1998; 54: 495-503 ။ [PubMed]
38 ။ Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBများအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 9: 205-211 ။ [PubMed]
39 ။ Gilliss BCM, Pieper J ကို, Carlezon ဒဗလျူကင်းနှင့် SKF-82958 ဆွစ်ဇာလန်-Webster ကြွက်တွေမှာဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ် potentiate ။ Psychopharmacology ။ 2002; 163: 238-248 ။ [PubMed]
40 ။ Roybal K ကို Theobold: D, ဂရေဟမ်တစ်ဦးက, DiNieri ဂျာ Russo SJ, Krishnan V ကို, et al ။ clock ၏နှောင့်အယှက်များကသွေးဆောင် Mania ကိုကဲ့သို့အပြုအမူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 6406-6411 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Miliaressis အီး, Rompre PP, တစ်ဦး moveable လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးအမူအကျင့်အလွှာပုံဖော်ဘို့ Durivage အေ Psychophysical နည်းလမ်း။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1982; 8: 693-701 ။ [PubMed]
42 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1996; 19: 319-340 ။ [PubMed]
43 ။ Liebman JM ။ ဆုလာဘ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှု: intracranial Self-stimulation နည်းစနစ်၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1983; 7: 45-72 ။ [PubMed]
44 ။ Miliaressis အီး, Rompre PP, Laviolette P ကို, Philippe L ကို, Coulombe ဃ Self-stimulation အတွက်ကွေး-ပြောင်းကုန်ပြီပါရာဒိုင်း။ Physiol ပြုမူနေ။ 1986; 37: 85-91 ။ [PubMed]
45 ။ Rompre PP, ပညာရှိ RA ။ brainstem Self-stimulation အတွက် Opioid-neuroleptic အပြန်အလှန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1989; 477: 144-151 ။ [PubMed]
46 ။ Vialou V ကို, ဝင်္ငါ Renthal W က, LaPlant QC, Watts EL, Mouzon အီး, et al ။ သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက် DeltaFosB ၏ induction မှတဆင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 14585-14592 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ Shirayama Y ကို, Ishida H ကို, Iwata M က, Hazama GI, Kawahara R ကို, Duman သည် RS ။ စိတ်ဖိစီးမှု limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dynorphin immunoreactivity တိုးပွါးနှင့် dynorphin ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ J ကို Neurochem ။ 2004; 90: 1258-1268 ။ [PubMed]
48 ။ Chartoff Eh, Papadopoulou M က, Macdonald ML, Parsegian တစ်ဦးက, Potter: D, Konradi ကို C, et al ။ Desipramine NAc တစ်ရှူးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-activated dynorphin စကားရပ်နှင့် CREB phosphorylation လျော့နည်းစေသည်။ Mol Pharmacol ။ 2009; 75: 704-712 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
49 ။ et al နယူတန်အက်စ်အက်စ်, Thome J ကို, Wallace TL, Shirayama Y ကို, Schlesinger L ကို, Sakai က N ကို။ နျူကလီးယပ်အတွက်စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းသို့မဟုတ် dynorphin ၏တားစီးလက္ခဏာတူသောအကျိုးသက်ရောက်ထုတ်လုပ် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 10883-10890 ။ [PubMed]
50 ။ Spanagel R ကို, Herz တစ်ဦးက, Shippenberg TS ။ ဆန့်ကျင်လုပ်သူများတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များ mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 2046-2050 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Shizgal P. Dynamic ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Self-stimulation စဉ်အတွင်း dopamine သေံအတွက်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2009; 198: 91-97 ။ [PubMed]
52 ။ သငျသညျ ZB, ချန် YQ, ပညာရှိ RA ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamic Self-stimulation အောက်ပါကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Dopamine နှင့်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်။ neuroscience ။ 2001; 107: 629-639 ။ [PubMed]
53 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်, G, Haines အီး, Rajabi H ကို, Stewart က J ကို, Arvanitogiannis တစ်ဦးက, Shizgal P. ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ် dopamine သေံအလားတူအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 121: 887-895 ။ [PubMed]
54 ။ Koob gf, Le Moal အမ်စွဲနှင့်ဦးနှောက် Antireward စနစ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008; 59: 29-53 ။ [PubMed]
55 ။ Walsh SL, EC, Abreu ME, Bigelow GE strain ။ Enadoline တစ်ဦးရွေးချယ် Kappa opioid agonist: လူသားတွေအတွက် butorphanol နှင့် hydromorphone နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology (Berl) 2001; 157: 151-162 ။ [PubMed]
56 ။ dong Y ကို, အစိမ်းရောင် T က, Saal: D, Marie H ကို, et al Neve R ကို, Nestler EJ ။ CREB နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 475-477 ။ [PubMed]
57 ။ Roitman MF, ဝီ RA, Tiesinga PH သည်, Roitman JD, Carelli RM ။ Hedonic နှင့်နျူကလိယသဘာဝဆုလာဘ်မှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုဆန္ဒရှိအေးစက်နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည် accumbens ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2010; 17: 539-546 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
58 ။ Derkach VA သို့, အိုး MC, Guire ES, Soderling TR ။ Synaptic plasticity အတွက် AMPA receptors ၏စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8: 101-113 ။ [PubMed]
59 ။ Shippenberg TS, Zapata တစ်ဦးက, Chefer VI ကို။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ Pharmacol Ther ။ 2007; 116: 306-321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ Jacobsen LK, Southwick သည် SM, Kosten TR ။ posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်: စာပေ၏သုံးသပ်ချက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1184-1190 ။ [PubMed]
61 ။ Swendsen J ကို, Conway KP, Degenhardt L ကို, Glantz M က, Jin က R ကို, Merikangas KR, et al ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Comorbidity စစ်တမ်း၏ 10 နှစ်နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်ရလဒ်များကို: ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ, အလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုအဖြစ်စိတ်ရောဂါ။ စွဲလမ်း။ 2010; 105: 1117-1128 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ လျူ RT ကို, အလွိုင်း LB. စိတ်ကျရောဂါအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးဆက်: သည့်ပင်ကိုယ်မူလစာပေနှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကြံပြုချက်များ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ Clin Psychol ဗျာ 2010; 30: 582-593 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-598 ။ [PubMed]
64 ။ McEwen BS, Gianaros PJ ။ Stress- နှင့် allostasis-သွေးဆောင်ဦးနှောက် plasticity ။ Annu ဗြာ Med ။ 2011; 62: 431-445 ။ [PubMed]